Orinasa fanesorana ny fitrandrahana mony - Sina Mpanala fanalana mony, mpamatsy
Cooleran'ny rivotra mangatsiaka
HIFEM Fananganana hozatra
Fitomboan'ny volo laser
Fanesorana tatoazy laser
Hydra Dermabrasion amin'ny tarehy
Rafitra laser an'ny laser miato
Fanesorana ny holatra
Slimming & Fat fampihenana
fanesorana amin'ny lalan-dra amin'ny laser
Fanesorana vaskola laser
2021 Hery lehibe mivarotra mafana ...
Masinina manamafy ny hoditra RF ...
Masinina fanesorana volo OPT IPL SHR azo entina
Mena ny hoditra
SHR fihenan'ny volo
Masinina fanarenana ny hoditra ho an'ny toeram-pitsaboana ara-pitsaboana sy spa
• Fihenan'ny volo maharitra
• fahasimban'ny masoandro
• pigmentation epidermal
• Famelomana hoditra
• Mony sy maro hafa
Masinina Ipl Multifunctional Beauty Machine Spa Equipment DPL IPL Fandramana fanesorana ny hoditra
fanesorana volo SHR-950 azo alaina ary milina fanarenana ny hoditra
Ny milina SHR-950 dia teknolojia revolisionera amin'ny fitsaboana amin'ny fanongotam-bolo IPL. Ny milina SHR dia manambatra modely fiasa IPL, E-hazavana ary SHR. Ampiasaina matetika amin'ny fanesorana volo, fanesorana volo maharitra, fanavaozana ny hoditra, fanadiovana ny hoditra, fanamafisana ny hoditra, fanatsarana ny fahamendrehan'ny hoditra sy ny famirapiratana, fanesorana pigmentation, sns.
SHR-950 fanesorana volo sy milina fanarenana ny hoditra
Masinina SHR-950B ampiasaina amin'ny fanesorana volo, fanesorana volo maharitra, fanalefahana ny hoditra, fanamainana hoditra, fanamafisana ny hoditra, fanatsarana ny elastika sy famirapiratan'ny hoditra, fanesorana pigmentation, sns. Ny maody SHR dia manafana moramora ny fololon'ny volo. Ny mpanjifa dia tsy mahatsapa afa-tsy ny hafanana sy fahatsapana hafetsena, ny sasany aza mampitaha azy amin'ny fanorana maivana. Ny rafitra dia mampiasa ihany koa ny teknolojia In-Motion, izay ihetsehan'ny tanana foana ny hoditra. Ny rafitra dia manambatra ny maody miasa amin'ny fanesorana volo laser izay misy ny maody miasa SHR handefasana tifitra marobe fa amin'ny angovo ambany, hahazoana vokatra tsy misy fanaintainana. Ny rafitra dia mety amin'ny karazana hoditra rehetra, eny fa na ny volon-koditra aza; Tsy toy ny Laser sy IPL nentim-paharazana, ny SHR dia azo atao mandritra ny taona tsy mila miafina amin'ny masoandro.
Pinxel-2s portable Microneedle RF & Fractional RF masinina
Ity masinina ity dia ampiasaina amin'ny mony, maratra, ketrona, fanesorana pigmentation, famerenanana ny hoditra, fampihenana ny mason-koditra lehibe ary fanavaozana ny hoditra, fampiakarana tarehy, fanamafisana ny hoditra .Pinxel-2 dia misy tahony efatra, ny RF Fractional (Non-invasive), Micro-fanjaitra RF tantanana (manafika), lohany mangatsiaka ary polar ratsy.
Ity milina ity dia manana maody Bipolar sy fomba Mono-polar maody fitsaboana roa, amin'ny maody Mono-polar, matanjaka kokoa ny angovo RF. Raha mampiasa maody polar Mono-polar dia mila mitazona ny tananana polar ratsy ny marary
Pinxel-2 Microneedle RF & Fractional RF masinina
Fanesorana ny holatra, fanesorana ketrona
Fampihenana ny mason-koditra lehibe, fanavaozana ny hoditra
Fanandratana tarehy, fanamafisana ny hoditra, famerenana amin'ny hoditra
picosecond nd yag milina fanesorana tatoazy laser
Ny angovo azo avy amin'ny laser Picosecond dia azon'ny melanin manga sy mainty. Ny melanin dia ho zarazaraina ho kely loatra ka azon'izy ireo atao metabolisma amin'ny rafitra lymphatic na levona ao anaty vatana. Noho izany ny tatoazy na ny pigmentation hafa dia hesorina tsy misy fahasimban'ny sela mahazatra. Ny fitsaboana azo antoka sy mety tsy misy downtime sy ny vokany.
milina picosecond nd yag milina fanesorana tatoazy laser
Amin'ny fampiasana ny vokatra mipoaka ny Picosecond Nd: laser YAG, ny laser dia mameno ny epidermis ao anaty dermis izay misy habetsaky ny pigment pigment. Hatramin'ny laser pulses amin'ny picosecond fa amin'ny angovo avo lenta, dia mivonto haingana ny valan-kazo voatifitra ary mivaky kely, izay hofoanana amin'ny alàlan'ny rafitra metabolika.
Picosecond Nd: milina fanesorana tatoazy yaglaser
Ny teknolojia laser dia nanatsara be ny fahaizana mitsabo ny lesan melanositika sy ny tombokavatsa miaraka amin'ny neodymium Q-switch pulsed: laser yttrium-aluminium garnet (Nd: YAG). Ny fitsaboana amin'ny laser ny lesyon pigmenta sy ny tombokavatsa dia mifototra amin'ny fitsipiky ny photothermolysis voafantina. Ny QS laser Systems dia afaka manamaivana tsara na mamongotra karazan'aretina sy tatoazy pigmental epidermal sy dermal miovaova izay mety hampidi-doza kely.
Laser estetika Co2, Co2 Laser Laser miato, Masinina mpanentana hozatra Ems, Fanesorana volo Shr Opt Ipl, Shr Ipl Opt, fanesorana ny holatra,